Tsananguro pfupi yeKufunga uye Kupedza - Izwi reShoko
Tsananguro pfupi yekufunga uye kufunga
Tsananguro pfupi yeKufunga uye Kupedza
Kana mhinduro yako iri yekuwana kunzwisiswa kukuru kwako iwe nenyika yatiri kurarama; kana iri yekunzwisisa kuti sei tiri pano panyika uye chii chakatimirira isu mushure mekufa; kana chiri chekuziva chinangwa chechokwadi cheupenyu, hupenyu hwako, Kufunga Nekupedzisira inokupa iwe mukana wekuti uwane mhinduro idzi. Uye zvimwe zvakawanda.
Mukati memapeji aya, ruzivo rwekare kupfuura nhoroondo yakanyorwa zvino rwaziviswa pasi rose-nezve Consciousness. Iko kukosha kukuru kweichi ndechekuti kunogona kutibatsira kuti tizvinzwisise pachedu pachedu, zvakasikwa. . . uye mberi. Iri bhuku harisi dzidziso inokuudza maitiro ekurarama hupenyu hwako. Munyori anoti chidzidzo chakakosha kumurume nemukadzi wega wega kuzvisarudzira wega zvekuita kana zvekusaita. Akati: “Handifungi kuti ndinoparidzira chero ani; Handizvione semuparidzi kana mudzidzisi. ”
Kunyangwe iri rakakura basa rakanyorerwa vanhu vese, vashoma pasi rese vakariwana. Asi magedhi arikusandukira sekuwedzera kutsvaga kunzwisisa zvinorehwa nematambudziko epamoyo uye epasi rese atinosangana nawo, pamwe nekurwadziwa nekutambura zvinowanzovaperekedza. Chido chemunyori kubva pamwoyo chaive chekuti Kufunga Nekupedzisira shanda sechiedza chebhekoni kubatsira vanhu vese kuti vazvibatsire.
Zvese zviri nyore kuverenga kuverenga uye anoshingairira wekutsvaga ruzivo rwakadzama haangabatsire asi kuve akashamiswa nehuwandu, huwandu uye ruzivo rwezvinyorwa zvinotaurwa mubhuku iri. Vazhinji vachashamisika kuti munyori akazowana sei ruzivo. Nzira isinganzwisisike yakagadzirwa iyi inyanzvi inotsanangurwa mune zvese zviri zviviri Chirevo neMunyori.
Percival akatanga kuratidza zvitsauko zve Kufunga Nekupedzisira Kutevera zviitiko zvekubhenekerwa kune simba, kwaaireva sekuziva kweConscious. Akataura kuti kuziva nezveConcenceity kunoratidza izvo "zvisingazivikanwe" kune iye anga achiziva kudaro. Zviitiko izvi zvakabvumidza Percival kuti vazowana ruzivo nezvechimwe chinhu neimwe nzira yekutarisa, kana icho chaakadana "kufunga chaiko." Yakanga iri kuburikidza nenzira iyi iyo bhuku rakanyorwa.
Kune huchokwadi mukunyora kwaPercival nekuti haina mhiko pakufungidzira, dzidziso kana kunyepedzera. Kuzvipira kwake kwakasarudzika kuchimiro chechokwadi chakapetwa hachimbombomira. Iri ibhuku rinotaura kushuvira mumoyo memunhu wese kuti vazive chikonzero nei vanhu vakaita saizvozvi. Kufunga Nekupedzisira ihurukuro inoshamisa isina kujairika iyo inobatanidza huwandu hwenyika dzakaratidzwa uye dzisina hunhu; nekudaro, inogona kuiswa kuhupenyu hwevese vanowana yarinosunungura meseji.